Mpanamboatra masinina mitambatra Manual, mpamatsy - China Factory Butt Fusion Machines Factory
Fampiharana sy fampiasa amin'ny milina fanamafisam-peo mahazatra dia welder fusion manual ho an'ny fantsona hatramin'ny 250mm. Miaraka amin'ny famolavolana matevina sy azo entina, dia ahafahan'ny mpandraharaha miasa amin'ny toe-javatra sarotra. Azonao atao ny misafidy ny takelaka fanafanana amin'ny alàlan'ny fampisehoana nomerika manampy ny mpamaky hamaky ny mari-pana amin'ny fomba marina sy mety. Izy io dia mety amin'ny fametahana fantsona plastika sy fittings vita amin'ny HDPE, PP, PVDF. Ny milina fantsom-paosin'ny tanana dia misy * Vatan'ny masinina misy clamp vita amin'ny aliminioma 2; * Coate Teflon ...
Masinina fanosihosena bokotra tanana -2Clamp
Masinina mitambatra mitambatra bokotra-4clamp mahazatra
Masinina-bokotra fusion manual-2clamp mahazatra